ကျွန်တော် ဂေးနေလား ??? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန်	: ကျွန်တော် ဂေးနေလား ???
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ၂၁ရာစုခေတ်မှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီမြင်တွေ့နေရပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာတော့ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပက်သတ်တဲ့ အယူအဆတွေကတော့ ကွဲပြားနေတုန်းပါပဲ။
အဲ့လို အမြင်မတူကြတဲ့ အယူအဆတွေထဲမှာ လူသားတစ်ဉီးချင်းစီရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်ကတော့ တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။
အများက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ လိင်တူအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ခံစားချက်တွေ အပြုအမူတွေရှိနေတတ်ကြတဲ့ ယောကျာ်းလေး မိန်းကလေးတွေအဖို့ကတော့ ဒီခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ပြောပြဖို့ အခက်အခဲတစ်ခုလဲ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ တချို့ မြီးကောင်ပေါက်လူငယ်တွေဆိုရင် ဒီလိုမျိုး အများနဲ့မတူတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်က သူတို့မှာရှိနေမှန်းတောင် သတိမထားမိတာမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခု သိလိုရာမေးက တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး တိတိကျကျရေရေရာရာ မသိဘဲ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့သူ ရွက်ပုန်းသီး ယောကျာ်းလေးတွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ် “ဂေး” ချင်နေပြီလား?… ဒါမှမဟုတ် ဒါက ပုံမှန်ပဲလား? ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသွားအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ခိုင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။
မေးခွန်း (၁) လိင်တူတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင်ကြိုးတွေ ရှိနေတတ်လား?
ကိုယ်ကတစ်ခါတလေမှာ အခက်အခဲတစ်ခုခု ကြုံလာရတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့အခါ စိတ်တိုစိတ်ညစ်တဲ့အခါ ကုန်ကုန်ပြောရရင် Mood အပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ တခြားသော သူတွေထက် သတိရတတ်တဲ့ တစုံတယောက်ရှိနေပြီလား? ပြီးတော့ အဲ့လူကလဲ ကိုယ့်လို ယောကျာ်းလေးပဲဆိုရင်တော့ ချိဖအနေနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုနေပါပြီ… ဒါပေမယ့် မစိုးရိမ်ပါနဲ့… နောက်မေးခွန်းတွေရှိပါသေးတယ်…
မေးခွန်း (၂) လိင်တူတွေအပေါ်မှာပဲ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုနေတတ်လား?
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ လိင်ကွဲတွေထက် ကိုယ်နဲ့ ဇာတ်တူသားတွေအပေါ်မှာပဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားနေတတ်တာမျိုးပါ… ဘယ်အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဒိုတို့အနေနဲ့ ချောချောလှလှမိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားနေရမဲ့အစား စတိုင်ခပ်မိုက်မိုက် လန်းတဲ့ ဘီးကျဲတွေကိုပဲ ရှိတ်နေမယ်… မိန်းကလေးတွေထက် ယောကျာ်းလေးတွေကြားမှာ နေရတာကို ပိုပြီး နှစ်သက်မယ်… ပြီးတော့ ကိုယ်တွေးသမျှအတွေးတွေကလဲ ကိုယ်လိုမျိုး ဇာတ်တူသားချိဖတွေနဲ့ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုပဲ တွေးမိနေမယ်စသဖြင့်ပေါ့…
မေးခွန်း (၃) လိင်တူတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွဲလမ်းမှုတွေ ရှိနေလား?
ကိုယ့်အနေနဲ့ ဇာတ်တူသားတစ်ယောက်အပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှုလောက်နဲ့တင် မပြီးဘဲ ဒီလူ့နဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကို တူတူလျှောက်ချင်တယ်… ဒီလူနဲ့အတူတူ လိင်မှုကိစ္စပါ ပါဝင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို အစပြုချင်တယ်… တခြားသော လိင်ကွဲတွေနဲ့ လိင်မှုကိစ္စ အတူနေတာမျိုးတွေကို မပြုလုပ်ချင်ဘဲ လိင်တူတွေနဲ့ပဲ လိင်ကိစ္စဆက်ယှက်ချင်နေတာမျိုးတွေပါပဲ…
ကဲအခုပြောပြထားတဲ့ အဓိကမေးခွန်း (၃) ခုလုံးမှာ ကိုယ်အဖြေက Yes ဆိုရင်တော့ သံသယတွေရှိနေတဲ့ ချိဖအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဆိုတာ ဆန်းစစ်နိုင်လောက်ပြီထင်ပါတယ်… ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက် (Sexual Orientation) နဲ့ပက်သတ်ပြီး ဖွင့်ပြောပြတာတွေကို လူအားလုံးကတော့ လက်မခံနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “ကိုယ်က ကိုယ်ပဲ မဟုတ်လား? သူများမှ မဟုတ်တာ” ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တစ်ခုကို ရင်မှာစွဲကိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တင်တဲ့ ခံစားချက်… စိတ်ပျက်တဲ့ ခံစားချက်တွေဘေးဖယ်ထားပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်နဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်သွားဖို့ သိလိုရာမေးက တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်နှင့် လိင်ဖြစ်တည်မှု